Fikradan cusubi ma tahay astaanta Adidas mid xagjir ah? | Abuurista khadka tooska ah
ka Astaamaha astaanta ayaa isbedelaya Waqtigu wuu socdaa, xitaa haddii ay yar tahay, wax yar bay ku hagaajistaan ​​halkan iyo halkaas si ay ula socdaan taariikhda. Waxaan tusaale u soo qaadan karnaa Nike, oo inkasta oo ay astaan ​​isku mid ah ahayd tobanaankii sano ee la soo dhaafay, ay yeelatay ganaax-u-hagaajin xitaa qaabab badan. Maaddaama khadkeeda qalooca fudud uu ka gudbay qoraalka sumadda, illaa maanta, in isla xariiqa qaloocsan aan ku garan karno mid kasta oo ka mid ah alaabada ay shirkaddu ka bilaabayso suuqa.
Fikradda dib u naqshadeynta nooca Adidas ee uu bilaabay naqshadeeye magaciisu yahay Oguzhan CalanWaxaad ku arki kartaa boostadan si aad u hubiso isbeddelka tayada ee la siiyay iyadoo la adeegsanayo saddexda baal ee jajaban ama xargaha, u guuritaanka qotomalada dhammaan cabirka isku mid ah, taas oo shaki la’aan ku siin karta muuqaal iyo dareen kale, sida aad ku arki karto tusaalooyinka la bixiyay ee nooca summaddu ku jiri doonto qaabkan cusub ee astaantiisa caanka ah.
Öçalaan, Naqshadeeye fadhigiisu yahay Frankfurt, wuxuu ku soo gabagabeeyey adeegsiga astaamo kala duwan oo mid kasta oo ka mid ah "magac-hoosaadyada" Adidas waxay jahwareer ku noqon kartaa macaamiisha isla markaana calaamadeeya istiraatiijiyad u horseedi karta khasaare dhaqaale.
Si loo abuuro isku xirnaan dheeri ah astaanta, naqshadeeye ayaa bixiya xalka calaamadda dib loogu qaabeeyey "saddex xarigood oo toosan" taas oo loo isticmaali karo dhammaan alaabooyinka Adidas labadaba barnaamijyadooda suuqgeynta.
Waxaad arki kartaa tusaalooyin dhowr ah oo ku saabsan sida calaamaddan cusub ee Adidas noqon doonto, taas oo lagu dabaqay badeecooyin iyo dukaamo kala duwan. Ahaanshaha gebi ahaanba toosan, aan dhahno waa inay la socotaa waqti dheer isla qoraalka Adidas, si dadweynaha lugeynaya ula jaan qaadaan isbadalkaniyada lafteeda, waxay si fudud ugu horseedi kartaa jahwareer. Uguyaraan waxay umuuqataa isbedel xagjirnimo ah oo quruxsan, laga bilaabo xagalka xariijimaha ilaa taagnaantooda.
Sideed u aragtaa isbedelkan astaanta ah? Ma fiicantahay? Ma waxay abuuri doontaa jahwareer? Isbeddel xagjir ah ayaa loogu talagalay nooc caan ah oo caan ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Fikrad cusub oo ku saabsan dib-u-naqshadeynta astaanta shirkadda Adidas